China na-ewuli ụgbọ oloko elu-Speed ​​nke nwere ike iru 800 maili ọsọ kwa elekere
N’agbata n’obodo abụọ dị na China, a na-ewu ọsọ nke kilomita 800 iji ruo ụgbọ elu ọkụ ọkụ. Ridegbọ okporo ígwè rịrị n’elu ahịrị Chengdu-Chongqing ga-ebelata 30 otu nkeji. China na-arụ ụgbọ oloko dị oke ngwa ngwa nke nwere ike iru maịlị 800 kwa elekere. Chengdu na Sichuan Province [More ...]
Hejaz Train 101 na Jordan Mgbe Afọ gachara
Ihe ngosi banyere ụgbọ elu Hejaz, nke a makwaara dị ka nnukwu ọrụ ikpeazụ nke Alaeze Ottoman, meghere na Jordan 101 afọ mgbe mmalite nke okporo ụzọ. Jazọ ụgbọ elu Hejaz pụtara nnukwu nrọ emezu. Njikọ nke Istanbul na Ala Nsọ [More ...]
Edebe ụbọchị izu tụba ya BTK ụgbọ okporo ígwè n'agbata Turkey Uzbekistan Cooperation
Turkey Uzbekistan Inter Governmental Joint Economic Commission 2. Emere nzukọ ahụ na Ngalaba Azụmaahịa dị na Ankara. Onye isi Minister nke National Education Reha Denemeç na Onye Isi Minista Transportgbọ njem nke Uzbekistan Davron Dehkanov jikọtara ọnụ. [More ...]
Na Russia, ụgbọ okporo ígwè na-ebu ibu na-emebi emebi mgbe oke mmiri kwaturu n'ihi oke mmiri ozuzo. Traingbọ okporo ígwè na-ere ọkụ gbara gburugburu n'ihi oke ide mmiri n'ihi oke mmiri ozuzo n'obodo Siktiyvkar nke Komi Republic nke Russia. Ibu ụgbọ oloko culvert [More ...]
Ndị na-azụ ahịa China na BTSO
Mmekorita ahia nke Consulate General nke China na Istanbul, Songfeng Huang na ndị nnọchiteanya nke ndị ọchụnta ego na ndị na-azụ ahịa na-azụ ahịa na China gara BTSO. BTSO Board Member Osman Nemli zutere ndị nnọchiteanya ahụ iji melite ahia na imekọ ihe n'etiti Bursa na China [More ...]
Ememme maka ọrụ e ji arụ ọrụ ụgbọ mmiri na-agbachitere na TRNC
Ememe nke na-enyefe ụgbọ mmiri na TRNC E mere mgbakọ na Kyrenia Port na TRNC. The ememe, Prime Minister Tatars nakwa dị ka Vice President Fuat Oktay, Turkey si nnochite anya na Nicosia, Ali Murat Başçer nke nzuko omeiwu Deputy onyeisi oche Celal Adan, Minister nke Transportation na Infrastructure nke Republic of Turkey [More ...]
Eji mgbochi dị mma na Jiangmen, Province Guangdong, China iji gbochie ụzụ ígwè dị elu na-emetụta nnụnụ na ala mmiri, nke na-emepụta ebe obibi maka nnụnụ nnụnụ 30 karịrị otu puku. Ihe nkwụsị na-emetụ egwu maka kilomita abụọ, 355 kilomita ogologo [More ...]
Na obodo Sadikabad, n'ebe ndịda Punjab na Pakistan, e gburu 1 nwanyị 11 70 na ihe karịrị XNUMX merụrụ ahụ n'ihi nkwekọrịta n'etiti ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè. Ọrụ nchekwa na-aga n'ihu na ìgwè ndị mberede, ndị nwụrụ ma merụọ ahụ [More ...]
Russia na Turkey-esiri dị iche iche okporo ígwè widths nke Mmụba Trade Volume
Turkish-Russian Business Council Vice President Ali Galip War, Turkey na ego nkwado n'etiti mba abụọ nwere dị iche iche track obosara nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na Russia ma gbochie ihe-ọmume nke ahia olu, o kwuru. Turkey bụ nwunye na nkọwa na InnoPro m 2019 Industry Fair [More ...]
KARDEMİR, Russia na-egosi n'ámá ụwa nke nwere INNOPROM Fair
Karabük Ụlọ ọrụ ígwè na ígwè (KARDEMİR) AŞ, nke na-eme ka ngwaahịa dị iche iche dị elu na ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ụbọchị ọ bụla, amalitela igosi na n'ámá egwuregwu ụwa. Minista nke Ahịa na Technology na Central Anatolian Exporters 'Association haziri Yekaterinburg, Russia. [More ...]
Ònye ga-emeri asọmpi elu ụgbọelu asọmpi?
Karịsịa n'Eshia na Europe, ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa abịawo ebe ha na-asọ mpi na njem ụgbọ elu ma na ọnụahịa tiketi na oge njem site na ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ. Njem ụgbọelu naanị [More ...]
'Akwụsịghị na-arụ ọrụ' n'okporo ụzọ ụgbọ oloko Russia
Ndị isi, ụkwụ ụkwụ na ụzọ ụgbọ oloko nwere ike ịkpata mmerụ ahụ na nsogbu ahụike dị iche iche, kwuru na otu ọganihu ọhụrụ malitere na ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị n'obodo dị iche iche na Russia. Ndị na-esochi omume a, ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ ụmụ nwanyị, na-aga ụkwụ n'ọdụ ụgbọ oloko. sputnik [More ...]
President Erdogan: "Turkey na China Common Mbak Vision maka Future '
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, otu n'ime isi media outlets na China, "Global Times" akwụkwọ akụkọ "Turkey na China: Common Vision maka Future nke mba abụọ" e bipụtara otu isiokwu akpọ. N'okwu e bipụtara na 'Global Times' China, President Erdoğan [More ...]
Ụgbọ njem ndị China State ga-ebu 720 Nde ndị njem na ọnwa abụọ
Site na otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè kasị ukwuu n'ụwa, China na-ezube ibu ndị njem 720 nde n'oge okpomọkụ n'oge afọ a. Dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, China State Railway Group ekwuputala na 1 [More ...]
China si ijeri-dollar ụgbọ okporo ígwè oru ngo, nke malitere dị ka 'a Ọgbọ Otu Way', tụgharịa uche nke Chinese ọchụ ntá ego na Turkey. Railway ngo n'ihi na ọ bụ Turkey nanị mmiri na Europe ileta Chinese ntá ego malitere itinye ego na ọtụtụ ebe na Turkey. ikpeazụ [More ...]
Mmadụ 9 na-anwụ na Bangladesh na ndị isi na Train Tracks na 535
Ebe ọ bụ na 2010 dị na Dhaka, isi obodo Bangladesh, e kpebisiri ike na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-anụbeghị ụgbọ okporo ígwè ma nwụọ n'ihi ụgbọ okporo ígwè ahụ ruru 535. Dịka ọnwu 1000 kwa afọ na okporo ụzọ okporo ụzọ Bangladesh, a ma ama maka ihe ọghọm na igbu onwe ya. [More ...]
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (309) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)